Monday October 05, 2020 - 10:14:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xaalad feejignaan heerkeedu sarreeyo ayaa looga dhawaaqay wadanka faransiiska kadib markii uu si aad ah ulaba kacleeyay caabuqa halista ah ee Carona Virus.
Wararka ka imaanaya Faransa ayaa sheegaya in dhowr magaalo oo ay ku jirto Paris lageliyay xaalad bandow u eg sababa laxiriira Viruska Covid19 kaas oo xarkaha goostay islamarkaana sababi kara baa layiri halis ka daran middii hore.
Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Faransiiska Jean Castex, ayaa shir jaraa'id ku sheegay in wixii ka dambeeya maalinta Talaadada magaalada Paris iyo gobolkeeda "feejignaan sare" lasaari doono kadib markii ay sii kordheen tirada kiisaska Corona virus.
Xaaladdan feejignaanta sare waxay ka dhigan tahay in la adkeeyo tallaabooyinka ka hortagga ah ama lagu soo rogo tallaabooyin dheeri ah meelaha dadweynuhu isugu yimaadaan sida jaamacadaha,iskuullada iyo maqaayadaha laga cunteeyo.
Mas'uuliyiinta Faransiiska waxay sheegeen in si faahfaahsan loosoo bandhigi dooni tallaabooyinkan islamarkaana shir jaraa'id uu qaban doono madaxa golaha xukuumadda Isniinta.
Wakaaladda wararka AFP waxay sheegtay in xaaladdan bandowga u eg socon doonto muddo 15 maalmood xiriir ah, saameynta ugu daran waxay ku yeelan doontaa hoteellada iyo maqaayada laga cunteeyo iyo sidoo kale Dalxiiska arrinkaas oo dhabarjab weyn ku noqon doonta dhaqaalaha wadankan latiihaya musiibada rabbaaniga ah.
Maalintii Axadda dowladda France waxay diiwaan galisay 12,565 kiis oo cusub oo coronavirus ah afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay, taas oo ka hooseysa tirada bukaannada ee maalintii hore waxaana arrinta lagu sheegay rikoor cusub.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay in tirada guud ee caabuqa tan iyo markii uu billowday cudurkan faafa ay gaartay 619,190 xaaladood.
Faransiiska ayaa diiwaan geliyay ku dhowaad 17,000 oo kiis oo cusub maalintii Sabtida. halka tirada guud ee dhimashada ayaa korortay waxayna gaartay 32,230, kadib markii 32 qof u dhinteen cudurka isbuucii lasoo dhaafay